Nhengo - Shoko reShoko • Iva nhengo
Vanhu vazhinji vanove nhengo dzeIzwi Foundation nekuda kwerudo rwavo rwemabhuku aPercival, simba rakadzama basa raPercival rave narwo pahupenyu hwavo uye chishuwo chekutitsigira mukuwana kuverenga kukuru. Kusiyana nemamwe masangano, isu hatina guru, mudzidzisi kana anotungamira masimba. Chinangwa chedu uye kuzvipira kwedu kuzivisa kuvanhu venyika chiumbwa chikuru chaPercival, Kufunga Nekupedzisira, pamwe nemamwe mabhuku ake. Isu tinowanikwa kuti tipe nhungamiro, kana tikakumbirwa, asi isu zvakare tiri vatsigiri vehungwaru hwekuzvitonga- kudzidza kuvimba nekuita masimba emunhu. Iwo Mabhuku ePercival anogona kushanda segwara rekubatsira nemaitiro aya.
Vose nhengo dzeThe Word Foundation, zvisinei pasinei nehupi hwehutsigiro hwaunosarudza, huchagamuchira magazini yedu yekota, The Word (Sample Magazine). Nhengo dzinogashirawo 40% kuderedzwa pamabhuku ePercival.
Izwi Foundation rinotsigira kudzidza kwemabhuku aPercival. Kubudikidza nemagazini yedu yekota, Izwi, takagadzira nzvimbo yekuzivisa vaverengi vedu nzira dzakasiyana dzekudzidza. Kana munhu akava nhengo yeIzwi Foundation, ruzivo urwu runowanikwa kuburikidza nemagazini yedu:
• Nhamba yevanhu vedu vanofarira kudzidza nevamwe.
• Kubatsirwa kubva kuThe Word Foundation kune avo vanoda kupinda kana kuronga mapoka ekudzidza munzvimbo dzavo.
Humwe hupenyu pasi pano humwe chikamu chezvitevedzana, seimwe ndima mubhuku, sechimwe chiito mumutambo kana sezuva rimwe muupenyu. Pfungwa yechirangaridzo uye yehupenyu humwe pasi pano ndeyezvikanganiso zvakakosha zvevanhu. HW Percival